आफताब जेल नगएसम्म छोराको किरिया गर्दिनँ............. - Bagaicha.com
आफताब जेल नगएसम्म छोराको किरिया गर्दिनँ………….
२ कार्तिक २०७६, शनिबार ०८:३१
रौतहट – रौतहटको राजपुरमा १२ वर्षअघि भएको बम काण्डमा मारिएका छोराको श्रीनारायण सिंहले अहिलेसम्म काजकिरिया गरेका छैनन्। अब पनि न्याय नपाएसम्म काजकिरिया नगर्ने उनको अडान छ। राजपुर बम काण्डमा उनका छोरा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह मारिएका थिए। ‘छोराको मृत्यु भएको थाहा छ तर कानुनले अहिलेसम्म लास देखाएको छैन। कसरी काजकिरिया गर्ने’ आँखाभरि आँसु पार्दै श्रीनारायणले भने, ‘छोरो मरेको हो भने न्याय पाउनुप-यो, जिउँदै छ भने देखाइदिनुप-यो। २०६४ चैत २७ गते साँझ बम विस्फोटमा छोरो मारिएको अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएको र आफूले १२ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म धाएर न्याय खोजिरहेको बताउँदै सिंहले अब भने न्याय पाउने र छोराको काजकिरिया गर्न पाउने आशा गरेका छन्। ‘बम काण्डका मुख्य अभियुक्त आफताब आलम पक्राउ परेकाले अदालतले न्याय दिने र मैले छोराको काजकिरिया गर्ने अवसर पाउने विश्वास छ।’ अरुलाई प्रभावित गर्न सक्ने पिन्टुको बोल्ने शैलीले गर्दा नेपाली कांगेसको प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन भन्दै राजपुरका शेख भदईले चैत १८ गते घरबाटै बोलाएर लगेको सिंह अहिले पनि झल्झली सम्झन्छन्। मेरो छोरा बम विस्फोटमा घाइतेमात्रै भएको थियो, मरेको थिएन। भारतको मोतिहारीमा उपचार गर्ने बहानामा छोरालाई बोरामा कोचेर इँटा बनाउने भट्टामा लगेर पोलेको सुनिन्छ।’ छोरालाई बोलाएर लैजाने शेख भदईलाई बारम्बार सम्पर्क गर्दा हुन नसकेपछि छोरालाई हत्या गरेर भट्टामा फालेको आफूलाई पनि विश्वास लागेको उनी बताउँछन्। विस्फोटको घटना लुकाउन आलम र उनका मतियारले घाइते र मृतक सबैलाई नजिकैको भट्टामा हालेको उनी बताउँछन्। त्रिलोकसँगै स्थानीय ओसी अख्तरलाई पनि सोही भट्टामा हालिएको आरोप आलममाथि लागेको छ। घटनास्थलमा पुगेकी ओसीकी आमा रुक्साना खातुनले छोराको जुत्तामात्रै भेटेकी थिइन्। प्रहरीले जाहेरी नबुझेपछि श्रीनारायण र रुक्सानाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। बमकाण्डको १२ वर्षपछि रौतहट क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पूर्वमन्त्री आलमलाई गत आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। घटनामा संलग्न अन्य चार फरार छन्। फरार हुनेमा आलमका भाइ महम्मद महताब आलम, बम बनाउने शेख भदई, शेख मोबिन र शेख सेराज छन्। अभियुक्त सबै राजपुरकै हुन्। रौतहट प्रहरीले उनीहरुको खोजी गरिरहेको छ।
आलमको पक्राउ ‘षड्यन्त्र’
भक्तपुर – नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता मोहम्मद अफताब आलमको पक्राउप्रति विमति जनाएका छन्। १२ वर्षअघिको घटनालाई लिएर अहिले पक्राउ गर्नुलाई नेकपाको नियोजित षड्यन्त्र भएको दाबी उनले गरे। कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वार शुक्रबार बोडेमा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले जनताको करबाट तलब खाने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी कुनै पार्टीको सेवामा नभई देशको सेवाम खटिनुपर्ने बताए। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ओली सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए। नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारी कम्युनिस्टका सेवक भइरहेको आरोप लगाए। प्रशिक्षणमा स्थानीय तहमा कांग्रेसका तर्फबाट विजयी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँ कमिटीका सभापतिलगायत सहभागी थिए। रौतहटमा २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा विस्फोटमा परी मृत्यु र घाइते भएका समेत गरी २२ जनालाई इँटाभट्टमा जलाएर मारेको आरोपमा आलम पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेपछि उनी सांसदबाट निलम्बित भएका छन्। श्राेत: नागरिक न्यूज